အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: လက်ကိုင်ဖုန်းရဲ့ အန္တရာယ်များ
30 Responses to “လက်ကိုင်ဖုန်းရဲ့ အန္တရာယ်များ”
ကျေးဇူးပါပဲ အမချောရေ....ခုလိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက်။ ကျနော်ကတော့ ဖုန်းကို ခေါင်းအုံးအောက်များ မထားမိလို့ကတော့ အဲဒီနေ့ အလုပ်နောက်ကျပြီသာမှတ်တော့ :)
မချောရေ... Hand Phone ရဲ့ Risk တွေကများလှချေလား။ မသိသေးတာတွေ သိရလို့ ကျေးဇူးပါနော်။
ကျေးဇူးပါဗျာ .. သိပေမဲ့သတိမမူမိတာလေးတွေမို့ ခုလိုရေးပေးတာကျေးဇူးပါ
ဈေးတွေလည်း ကျ လာ ပါတယ်
ခုထက်ထိ ကို မ၀ယ်နိင်သေးတာ
လေးငါးရှစ်နှစ်လောက်ဖုန်းသုံးတုန်းက အိပ်ချိန်ဆိုရင်ဖုန်းပိတ်အိပ်တတ်တယ် နောက်လက်ကိုင်ဖုန်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေသိလာတော့ နားကျပ်တပ်သုံးတယ် အပေါင်းသင်းတွေကတော့ ပဲများတယ်တဲ့.... တကယ်တော့ သတိထားသင့်ပါတယ်
သိသင့်တာလေးတွေ တင်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။
ညဖက်လာတဲ့ ဖုန်းတွေဆိုရင် ဒေါသတော်တော် ထွက်မိတယ် မချောရေ။
ဖုန်းမပြောတော့ဘူး... နဂိုကမှ ကလီစာတစ်ခုကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတဲ့အထဲ ဦးနှောက်တို့ မျက်စိတို့ နားတို့ ထိခိုက်ပြန်ရင် သွားပါပြီနော်... ဖုန်းမဆက်တော့ဘူး မတ်စိပဲပို့ပါတော့မယ်...
မချောရေ အရမ်းကျေးဇူုးတင်ပါတယ်။ ၀တ်ရည်လည်း နောက်ပိုင်း လက်ကိုင်ဖုန်းအစား ရိုးရိုးဖုန်းကို ပိုအသုံ့းပြုသင့်တယ်ဆိုတာ နားလည်သွားပါပြီ။ ကျေးဇူးပါ
အင်း....နောက်တစ်ခါ ဖုန်းကို အကြာကြီးမပြောမိအောင် သတိထားမှ....း)
ဆင်ခြင်စရာများကို ဖတ်လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးပါ
အင်းးးးးးးးးးး သတိထားနေရင်းကပဲ တနေ့တနေ့ကို အကြာကြီး ဖုန်းပြောဖြစ်တယ်.။
အရင်တုန်းက ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာတော့ နားကျပ်သုံးရင် အန္တရယ်ကင်းသလိုလို ဖတ်မိတယ်.. အခုမှ နားကျပ်လည်း မကောင်းဘူးဆိုတာ သိရတယ်။
ကိုယ်ကတော့ ဖုန်းအကြာကြီး ပြောရမှာ ဝါသနာမပါလို့ ပူစရာတော့ မလိုပါဘူး.. :D
တကယ့်ကို အဖိုးတန်တဲ့ပိုစ်ပါ။ မသိသေးတာ အများကြီးပဲ. ပရင့်ထုတ် သိမ်းထားလိုက်ပြီ..
ကြောက်တတ်ရင်တော့ ကြောက်စရာကြီးနော်။ လူတိုင်းကလဲ ဟန်းဖုန်းနှင့်မကင်းနိုင်ကြတော့ စိုးရိမ်စရာဘဲ။ လမ်းလျောက်သွားရင်း ဖုန်းပြောရင် ကျနော်ဆိုလဲ ဖုန်းကိုနားနှင့်ဖိကပ်ပြီး စကားပြောလေ့ရှိတယ်လေ။ ဒါမှ ပီပီသသကြားရတယ်။ အရာရာတိုင်းမှာ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးတွေ ရောပြွမ်းနေတယ်နော်။ မျှဝေပေးတဲ့အတွက် တကယ်ကျေးဇူးပါ။
နေရာတိုင်း အကျိူးနဲ့ အပြစ် ရှိနေတယ် ဆိုပေမယ့် ဒီလို ခြေခြေမြစ်မြစ် သိထားတော့
မလိုအပ်ဘဲ ဆိုးကျိုး မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိင်တာပေါ့။
မမချောရေ .. တာမီးကတော့ လက်ကိုင်ဖုန်းကို သိပ်မပြောဖြစ်ဘူး .. ဖုန်းပြောရတာ ပျင်းတယ်လေ .. အများဆုံးပြောဖြစ်ရင်လဲ ၅မိနစ်ဘဲ .. ၅မိနစ်လောက်ဆို လူက အီနေပြီ .. ခုလက်ကိုင်ဖုန်းရဲ့အန္တရယ်တော့ သိပြီမမ .. လက်တော့ရဲ့အန္တရယ်ကိုလဲ ပြောပြေပေးပါဦးနော် .. တာမီးက များသောအားဖြင့် ပလက်အိပ်ပြီး ဗိုက်ပေါ်တင်လို့ကွန်ပျူတာ ကြည့်တတ်လို့ ပါမမ .. မျှော်နေမယ်နော် ..
အန္တရာယ် ရှိမှန်းသိပေမယ့် ဒီဖုန်းနဲ့ ထမင်းစားနေရတော့
၂၄ နာရီ ဖုန်းနဲ့ ဝမ်းရေးပြုနေရတောလေ.....
သူ့ကိုပဲ ယုယနေရတာ၊ အလုပ်ဖုန်းက လိုင်း နှစ်ခု (SG & M'sia)
ပါစင်နယ်က တစ်လုံး၊ ဖုန်းသံကြားရင် ရင်တုန်/ခုန်နေရတာ....
အဲဒီ life ကိုလည်း ဟိတ်တယ် :)
Btw... အခုမှ ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်ဖြစ်တာ.... ဒါပေမယ့် fwd mail က နေ့ခင်းကရင် ဝင်လာနေပြီ။
ဒီလိုတွေကြောင့် မမန့်ဖြစ်တာ.... အပေါ်က မန့်ထားတာကိုသာ ကြည့်လိုက်
ကိုးနတ်ရှင်က အဲလို ဒက္ခပေးတာ။
ဖုန်းကို နေ့လဲပြော ညလဲပြော ကားပေါ်မှာလဲ ပြော ရထားပေါ်မှာလဲ ပြော ... ဖုန်းအပြောနိုင်ဆုံး ပြိုင်ပွဲဝင်ရင် ဆုချိတ်နိုင်လောက်တယ်။ ပြောလွန်းအားကြီးလို့ နားတွေနာလာပြီး ဆေးသောက်ယူရတဲ့အထိ။ ဒါလဲ အမှတ်မရှိဘူး ပြောတုန်းပဲ။ ဆိုးတယ်နော် ...
ချောရေးထားတဲ့ ဖုန်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ သေချာ မဖတ်ရဲဘူး ... အကြမ်းမျဉ်းပဲ ဖတ်တယ် ... သေချာဖတ်မိလို့ လန့်သွားရင် မပြောရဲတော့မှာစိုးလို့ ... ဟီးးးး :D
သိထားတော့ကြိုတင်ရှောင်လို့ ရှားလို့ ရတာပေါ့။
မချောပြောလို့ မ၀ယ်တော့ဘူး (အမှန်တော့ မ၀ယ်နိုင်လို့ပါ) ဟား ဟား
ဒါပေမယ့် လက်ကိုင်ဖုန်း သမားတွေကို တော့ ဒီစာ ကို ပေးဖတ်ရမယ်. . .
ညီမလေး ခေါ်န် said...
ကျေးဇူးပဲနော် .........ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အခုသိတော့လဲ အရင်ကပြုလုပ်ခဲ့ဖူးတာတွေကို ရှောင်လို့ ရတာပေါ့ .....ပြီးရင်ကော်ပီလိုက်ပြီနော်......နောက်ထက်အများကြီး တင်နိုင်ပါစေအမ ..
ကျွန်မလည်း သားကို ကိုယ်ဝန်ရှိတုန်းကတော့ အရမ်းကို သတိထားခဲ့တယ်။ အခုတော့ ဖြစ်သလိုနေမိပြန်တယ်။ တကယ်က အမြဲဂရုစိုက်သင့်တာပါ။
အိမ်ရောက်ရင်တော့ အလုပ်ဖုန်းက ပိတ်ပြီးသားပဲ..။
တခါတခါ ဒီဖုန်းတွေ ဘယ်သူကများ တီထွင်ခဲ့ပါလည်းလို့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့တွေးမိတယ်။